Haybed Eebbe Ku Siiyey Habeen La Iskama Qaado !! WQ: Sucuud C. Faarax | Himilo Media Group
Maalmihii Guumeystihii ingiriis uu haystay dhulkii Hindiya la isku odhan jiray ayaa sarkaal ka tirsanaa ciidankii mustacmaradii ingiriis ayaa dhirbaxay nin Hindi ah, se ninkii Hindiga ahaa dhirbaaxadii wuxuu ugu beddelay feedh inta xooggii ah oo uu dhulka ugu tuuray sarkaalkii Ingiriiska ahaa.
Sarkaalkii wuxuu isla-markiiba u orday dhankii Taliyihii ka sareeyay si ninka Hindiga ah loogu xukumo dil, oo ay ku cibra-qaataan cid kasta oo isku dayda inay ku ficil celiso saraakiisha isticmaarka, laakiin Taliyihiisii wuxuu kala kulmay wuxuu filayay wax ka duwan waxaanu u dhiibay 50,000 Rubbi (Lacagta Hindiya) waxaanu ku amray in uu siiyo ninkii Hindiga ahaa isaga oo u muujinaya inay tahay xaal-marin ama raali-gelin.
Ninkii Hindiga ahaa ee faqiirka ahaa ayaa ka aqbalay xaal-marintii kana qaatay lacagtii waxaanay qadarkaa lacagta ahi noqotay tii u horseeday ninkii Hindiga ahaa inuu noqdo dadka ugu taajirsan Waddanka Hindiya.
Muddo ka dib, Taliyihii ayaa u yeedhay Sarkaalkii waxaanu ku amray in uu ku soo booqdo Qasrigiisa ninkii Hindiga ahaa ee taajirka noqday oo uu waliba mar kale ugu celiyo oo uu ku hor-dhirbaaxo dhammaan shaqaalihiisa iyo ilaaladiisa gaarka ah isaga oo aan wax hor-dhaca u muujinayn.
Sarkaalkii wuu fuliyey amarkii la siiyay, hase-ahaatee wuxuu Askarigii Ingiriiska ahaa aad ula yaabay ninka uu dhirbaaxay oo dhoolla-caddeeyay markii ay ku dhacday Dhirbaaxadiisu, waxaanu ku soo noqday Taliyihiisii, una sheeg wuxuu kala kulmay Ninkii uu dhirbaaxay mar ka labaad iyo akhlaaqdiisii oo is-beddeshay.
Taliyihii ayaa si xikmadaysan ugu yidhi Askarigiisii “Markii hore ninkaasi muu haysan wax aan ahayn karaamadiisa oo keentay inuu is difaaco, balse markan dambe oo aynu ku iibsanay karaamadiisii 50,000 Rubbi waxa uu yeeshay ganacsigiisa iyo masaaliixdiisa oo uu difaacayo isaga oo ka fog karaamo iyo wixii la mid ah.
Qalinkii: Sucuud Cabdi Faarax